Jubbaland : Qofkii ugu horeeyay ayaa u dhintay abaaraha ka jira deegaanada maamulkaasi | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Jubbaland : Qofkii ugu horeeyay ayaa u dhintay abaaraha ka jira deegaanada maamulkaasi
Jubbaland : Qofkii ugu horeeyay ayaa u dhintay abaaraha ka jira deegaanada maamulkaasi
Iyadoo mudooyinkii dambe ay soo kordheysay walaaca iyo qeyla dhaanta laga muujinaayay abaaro baahsan oo ka jora deegaano ka mid ah maamul goboleedka Jubbaland ayaa lasoo sheegaya in haatan uu u geeriyooday qofkii ugu horeeyay Gaajo iyo Haraad.
Sida la xaqiijiyay wiil yar oo da’diisa lagu sheegay 12 sano jir ayaa ugu geeriyooday Gaajo iyo Haraad deegaan ka tirsan maamulka Jubbaland gaar ahaan Galbeedka magaalada Kismaayo.
Mid ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada maamulka Jubbaland ee sida weyn uga jirto abaarta ayaa warbaahinta u sheegay in xoolahii ay abaartu dhameysay, islamarkaana dadkii ugu badnaa ay isaga barakaceen deegaanada Galbeed ee magaalada Kismaayo.
Degaanada ay abaartu sida weyn u saameeysay dadka iyo duunyadaba waxaa ka mid ah Buulo Xaaji, Cabdalla Biroole uyo degaannada kale ee u dhaxeeya Magaalada Ksimaayo iyo degaanka hoosingow.
Degaano badan oo ka tirsan gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa laga soo sheegayay abaaro baahsan oo saameeysay dadka iyo duunyada, waxaana haatan xaaladu u muuqaneysa mid kasii dareysa maadama qofkii ugu horeeyay uu u dhintay abaaraha ka jira deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland.
Jubbaland : Qofkii ugu horeeyay ayaa u dhintay abaaraha ka jira deegaanada maamulkaasi was last modified: November 7th, 2021 by Admin
Heshiis Ku Saabsan Hanaanka Saami Qeybsiga Kheyraadka Dalka Oo La Gaaray
Wasiirka haweenka oo ka digtay in la baalmaro heshiiska Doorashada
Azerbaijan oo guul ka sheegatay dagaalka culus ee kala dhaxeeya Armenia